Duqa Magaalada Güler wuxuu kormeeray Çambaşı Guryaha Plateau Bungalow | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Duqa Magaalada Güler wuxuu kormeeray guryaha Çambaşı Plateau Bungalow
08 / 01 / 2020 Ciidamada 52, SAWIRADA, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER
guler cambasi yaylasi bungalow guryaha la baaray
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Guler, magaalada Kabaduz ee Çambaşı Plateau waxaa lagu dhisay baaritaanadii laga helay bungalows.
Digaagada, oo dhawaan laga furay Çambaşı Plateau, waxay ku guuleysatay qadarinta qof kasta oo u dhexeeya 7 illaa 70 kuwaas oo doonaya inay ka fogaadaan walaaca magaalada. Noocyada qulqulaya ee soo jiidata dareenka raaxada iyo nashqadeynta qaaska ah waxay la yaab ku noqotaa kuwa ku arka muwaadiniinta aragtidooda dabeecadda u gaarka ah. Isla mar ahaantaana, boodhadhka barafka leh ee ay wataan muwaaddiniintu waxaa qaada muwaadiniin iyagoo ku raaxeysanaya safar qaas ah.
"MA KA TURKEY, waxay ka codsanayaa NERESİ Buur ee dunida"
mudulladaan waxaa kaliya dilayo codka mashaariicda keeno dunida ma aha oo kaliya in Turkey Army Metropolitan Duqa Magaalada Dr. Mehmet Hilmi Güler wuxuu yidhi, Wez Waxaan sii wadaynaa dadaalkeenna ah sidii aan u horumarin lahayn dalxiiska jiilaalka ee Ordu isla markaana aan Ordu u noolaan lahayn xilli kasta. Macnaha guud, waxaan ka dhignay boodhadh Çambaşı Plateau oo ah mid ka mid ah meelaha ugu jecel Ordu xilliyada xagaaga iyo jiilaalka. Meeshan si taxaddar leh ayaa loogu talagalay. Raaxo la'aan. Markii la furay furitaanka burooyinka, qof walba wuxuu muujiyey xiisaha weyn laga bilaabo 7 ilaa 70. Ma aha oo kaliya ka soo Turkey, waxay rabaan halkaas oo waa taas in dunidu. Ilaa bisha May, boos celisyada oo dhan ayaa buuxa. Sidaa darteed, waxaan kuwa cusub ku soo dari doonaa xirmooyinka saqafka culus markii baahida weyn loo qabo. Waa shaqo aan caadi ahayn. Haddii aan u baahdo in aan warqad ka bixiyo buugaagta, waa hudheel xiddig 5. Dhamaad
"5 STOT HOTEL AYAA UGU DUWAN SII 5AAD"
Isagoo sheegay in ballanqaadyada mid loo wada hayo, Duqa Magaalada Güler wuxuu yidhi, 5 Shaqooyinteena hoteelka 5-xiddigle ah waxay ka sii socdaan Çambaşı Yaylamız. Dhismaha darxumo ayaa la dhammeeyay dabaqa XNUMX-aadna waa la gaadhay. Kadib, xeerarka deegaanka ayaa la bilaabayaa. Howlaheena balliyeed ayaa halkan ka sii socda. Mashaariicdayada, Ordu si dhakhso ah ayey ugu dhaqaaqaysaa inay noqoto magaalo Ordu ah. Waxaan ilaalinaynaa ballanqaadyadeena ”.
Duqa magaalada Geelle: 'Port Koyteyner wuxuu hagaajin doonaa Unye'
Duqa Magaalada Guler 'Waxaan ka wada hadlaynaa Samsun Sarp Railway'
Geeridii Dunida: Orphan Geeska Sawir Sawir Sawir ah oo lagu qabtay Tünel
Hoambaşı Guryaha Plateau Bungalow